“Dagaal Beeleedka Gobolka Sool, Gobaladda Waqooyi ayaa ka dambeysa…
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Puntland Dr Jaamac Faarax Xasan ayaa Gobaladda Waqooyi ku eedeeyay in ay hurineyso dagaal beeleedyo iyo xiisad ka dhalatay oo ka taagan Gobolka Sool.
Dr. Jaamac ayaa sheegay in Gobaladda Waqooyi dagaalkaas ay ka damacsan tahay ka faaiideysiga kolka dhinac kamid ah labada maleeshiyo beeleed laga awood badi ama laga saaro deegaanka ay ku sugan yihiin.
Ciidamo katirsan Maamulka Gobaladda Waqooyi ayuu sheegay in ay ku sugan yihiin deegaannada dagaal beeleedka ka jiro, iskuna daawanayaan dhinacyada dagaalamaya halkii laga doonayay in ay kala dhexgalaan sida uu hadalka u dhigay.
“Gobaladda Waqooyi ayaa isku direysa Beelaha ku dagaalamaya Gobolka Sool, ujeedkoodu waa in ay ka qabsadaan dhinicii awood badiyo ama Magaalada gacanta ku dhigo, Ciidamo ka socda Maamulka Gobaladda Waqooyi oo goobta ku sugan ayaa diiday in la kala dhexgalo” ayuu yiri Wasiirka Caafimaadka Puntland.
Gobaladda Waqooyi kama aysan hadlin eedeyntaan kaga timid Wasiirka Caafimaadka Puntland, sidoo kale ilaa haatan ma jiro qof kamid ah Waxgaradka Deegaanka oo Warbaahinta la wadaagay arrintaan.
Deegaanno dhowr ah oo katirsan Gobolada Sool iyo Sanaag waxaa isku hor fadhiya Ciidamada Gobaladda Waqooyi iyo Puntland oo marar badan ku dagaalamay, labada dhinac waxa ay kala sheeganayaan maamul ahaan in ay hoostagaan deegaannada dhaca Goboladaas.
axadle 3885 posts